Mareykanka oo sharci darro ku tilmaamay qaabkii xilka looga qaaday Xasan Cali Kheyre iyo digniin ay soo saareen | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Mareykanka oo sharci darro ku tilmaamay qaabkii xilka looga qaaday Xasan Cali...
Mareykanka oo sharci darro ku tilmaamay qaabkii xilka looga qaaday Xasan Cali Kheyre iyo digniin ay soo saareen
Xorriya Online: Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qaabka ay u dhacday xil ka qaadista Xasan Cali Kheyre. Warbixin qoraal ah oo ka soo baxday safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka xun tahay ficilladii madaxweynaha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ee ay kalsoonida kagala noqdeen xukuumaddii uu hoggaaminayey Xasan Cali Kheyr.
Safiirka Mareykanka u fadhiyo Soomaaliya, Yamamoto
Qoraalka ayaa lagu sheegay in ay arrintaani xagal daacineyso geedi socodka wadahadallada iyo wada xaajoodyada u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul-goboleedyada.
Warbixinta ay safaarada soo saartay ayaa ku tilmaamday qaabkii xilka looga qaaday Xasan Cali Kheyre in uu ahaa habraac khaldan ayna suuragal tahay in uu sababo dib u dhac u keenayo qorshihii dib u habeynta iyo taageerada Maraykanka uu siinayay Soomaaliya.
Waxana safaaradda ay sheegtay in xasilooni, ammaan iyo horumar lagu gaari karo oo kaliya wax wada qabsi iyo hogaamiyaasha Soomaaliyeed oo ay meel dhexe isugu yimaadaan.
Safaarada ayaa ugu baaqday Dowlada Federalka iyo Maamul Goboleedyada, Golaha Shacaba iyo qeybaha kale inay sii wadaan fulinta heshiiskii lagu gaaray Dhuusamareeb.
“Waxaan tallaabo ka qaadi doonaa kuwa wax burburiya oo doonaya in ay carqaladeeyaan horumarka iyo xasiloonida, dowladnimo loo dhan yahay iyo horumarka. Ma dooneyno in Soomaaliya ay waddo qaldan raacdo,Maraykanku waxa uu marwalba garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyaasha danta dalkooda ka hormariya tooda gaarka ah.”ayaa lagu soo gunaanuday qoraalka ka soo baxay safaarada Maraykanka ee dalka Soomaaliya.